भक्तपुरमा स्थानीय दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण, संक्रमित जनप्रतिनिधि रहेकाे खुल्याे – Everest Pati
भक्तपुरमा स्थानीय दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण, संक्रमित जनप्रतिनिधि रहेकाे खुल्याे
भक्तपुर, १० जेठ । भक्तपुर नगरपालिकाभित्र स्थानीयमा एक हप्ताभित्र दोस्रो व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लागेको छ ।
नगरपालिकाले स्वाब संकलन गरेको तेस्रो दिनमा वडा नं. ९ बस्ने वर्ष ४२ की एक महिलामा कोराना भाइरस संक्रमण भएको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले शुक्रबार पुष्टि गरेको हो ।
संक्रमित महिला वडा नं. ९ तुमचो दुगुरे (हाल मालपोत भएको क्षेत्रमा) बस्ने जनप्रतिनिधि (वडा सदस्य) रहेकाे नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिनुभयाे । भक्तपुर नगरपालिकाले आरडीटी विधिबाट गरेको परिक्षणमा त्रुटि देखिएपछि सिधै पीसीआर प्रविधिको लागि स्वाब संकलन शुरु गरेको थियाे ।
यसअघि मंगलबार भक्तपुर नगरपालिकाका स्थानीयलाई पहिलोपटक कोरोना संक्रमण देखिएकाे थियाे । नगरपालिकाले बुधबार जनस्वास्थ्य कार्यालय च्याम्हासीहँमा जनप्रतिनिधि, सफाई कर्माचारी , स्थास्थ्यकर्मीको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको थियो ।
स्वाब संकलन गरी टेकु पठाएकामध्ये २९ जना जनप्रतिनिधिको रिपाेर्ट आएको छ । जसमध्ये एक जनाको भने पोजेटिभ देखिएको नगरप्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो । संक्रमणलाइ समुदायमा फैलिन नदिन संक्रमित बसोवास गर्ने घरलाई प्रहरीले सिल गरेको छ ।